🥇 ▷ Oppo patent kale oo xiiso leh oo loogu talagalay kamarada hore (sawir) ✅
Oppo patent kale oo xiiso leh oo loogu talagalay kamarada hore (sawir)
Oppo wuxuu yiri Find X wuxuu lahaan doonaa muuqaal cajiib ah oo dhan 93.8% oo ah shaashadda jirka. Sida haddii taasi aysan ku filneyn telifoonkiisii ​​ugu dambeeyay ayaa isna leh mid kamarad soo dejineysa oo kuu oggolaaneysa inaad iskaa u qabato, xalka ugu quruxda badan dareenka ilaa hadda la arkay. Laakiin arrimuhu goor dhow way isbadalaan.
Shirkadda Shiinaha run ahaantii waxay u muuqataa inaysan qancin oo runtii way muuqataa diyaar u ah inaan ku sii wado dariiqa hal abuurka, sida qaar ka mid ah rukhsadaha dhowaan diiwaangashan ay soo jeedinayaan. Aynu ka wada hadalno caddeynno kala duwan oo walaac ka qaba mid laablaabashada casriga ah (chimera run ee qaybta, arag Galaxy X), laakiin ka sarreeya dhammaan hal asalka iyo doorka xiisaha leh ee kamarada hore ee caadiga ah waxaan la baranay sanado.
AKHRISO: Xiaomi Mi A2 Lite rasmi ah
Patentiga daabacay Ururka Caalamiga ah ee Hantida Maskaxda (WIPO) runti waa mid mid ” laba-screen ” oo leh dhinaca hore aan lahayn kaameero oo ay kujiraan muraayadda koowaad iyo shaashadda sare ee dhabarka. Kormeeraha labaad wuxuu u adeegi doonaa inuu soo bandhigo macluumaad fara badan oo u oggolaanaya eeg waqtiga dhabta ah sawirada uu toogtay kamarad gadaal. Marka la soo koobo, sida loo qaato selfie adoo taleefanka u rogaya.
Beddelka u dhexeeya labada bandhig waxaa lagu sameyn lahaa taabasho fudud. Kormeeraha sare wuxuu noqon karaa LCD ama OLED, laakiin si kastaba ha noqotee waxaa lagu meeleyn doonaa meesha ugu sarreysa ee taabaneysa sawir qaade, Ka fogow xiriir aad suurta gasho adigoo taleefanka gacanta ku haya sida caadiga ah. Sida iska cad waa fikrad mana lihin wax muujinaya suurtagalnimada in si dhab ah loo gaaro waxa hase yeeshe a ‘fikrad u fudud sida ay u soo jiidasho leh (in kasta oo dhammaantood lagu xaqiijin doono isticmaalka wax ku oolka ah).
Via: GizmoChina, Aan Go Digital